सोसल मिडिया – MySansar
Category: सोसल मिडिया
आजभोलि अवार्डको लहरै चलेको छ। कहिले फलानो अवार्ड भनेको छ कहिले चिलानो। हरेक अवार्डसँग एउटा न एउटा विवाद। मानौँ अवार्ड र विवाद पर्यायवाची शब्द हुन्। अवार्डको यो बाढीमा एक जना पत्रकार डिबी खड्काले अवार्ड जित्ने सरल र सहज तरिका आफ्नो फेसबुकमा बयान गरेका छन्। पढ्नुस् उनको अवार्ड जित्ने टिप्स- विभिन्न अवार्डमा नोमिनेशनमा परेका मित्रहरुले भोट… Continue reading
-राम लोहनी- आज छोरीले मलाई ‘सामान्य ज्ञान’ को एउटा “असामान्य” प्रश्न सोधी- Who ‘is’ the light of the world? आफूलाई थाहा भएको फर्‍याकफुरुक लवजमै सुनिन्थ्यो। कुरा त मैले बुझेकै थिएँ। मैले भनें “गौतम बुद्ध”। होइन, होइन, मिलेन, मिलेन — छोरीले भनी। बुद्ध त light of Asia पो हो। Light of the world त जिजस क्राइस्ट… Continue reading
बाबुराम भट्टराईको ‘नयाँ शक्ति’ मा एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्री पनि जाने भन्ने खबर सोसल मिडियामा खुबै भाइरल भएको तपाईँले पनि देख्नुभयो होला। आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा देखिने सबै कुरा सत्य हुँदैनन्। झाँक्रीको विषय पनि यस्तै भयो। मंगलबार राति फेसबुकमा लामो स्टायटस लेख्दै उनले यसको खण्डन गरेकी छिन्। पढौँ उनको भनाई जस्ताको तस्तै – प्रिय साथीहरू !… Continue reading
-सोम खनाल- चीन बाट तेल आयात गर्दाको अनुमानित अर्थवस्था काठमाण्डौ – बिदूर – ६५ किमि बिदूर- रसुवागढी- अनुमानित ९० किमि रसुवागडी- केरुङ् – अनुमानित १५० किमि केरुङ् – सिगात्से – ४८० किमि जम्मा दूरी: ७८५ किमि एकतर्फी, १५७० किमि दुईतर्फी रित्तो र भारसहितको गाडी गुड्ने औषत गती ३५ किमि प्रति घण्टा मान्दा जम्मा लाग्ने समय:… Continue reading
फास्ट ट्र्याकको अङ्कगणित
Posted on October 7, 2015 October 7, 2015 by mysansar
प्रश्न : अहिले भनिएको लगानी कति? उत्तर : ११२ अर्ब प्रश्न : कतिमा बन्छ? उत्तर : ८० अर्ब प्रश्न : कति फरक पर्‍यो? उत्तर : ३२ अर्ब प्रश्न : किन फरक पर्‍यो? उत्तर : आफैं बुझौं।
भगवान शिवका तपाईँले अनेक रुप देख्नुभो, सुन्नुभो होला। अनि भगवान शिवका धेरै थरिका मूर्तिहरु पनि देख्नुभो होला। तर मलाई लाग्दैन, तपाईँले अहिलेसम्म यस्तो खालको रुप भएको कुनै मूर्ति अहिलेसम्म देख्नुभएको छ। यी शिवजीको हातमा मोबाइल छ, अनि सुट प्यान्टमा गजबसित पो ठाँट्टिएका छन् त।
-होमनाथ ढकाल- नमस्कार म कहिले शिखर, कहिले सम्राट र कहिले अमिर उपनामले परिचित थिंए जनयुद्धताका। जम्मा थोरै १५ बर्ष अभ्यास गरेँ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पार्टीमा। अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो र शोषणविरुद्ध न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्ने महान सपना बोकेर (कम्युनिस्ट हो तो ऐसा क्रान्तिकारी भन्दै) हाम्फालेँ। प्रचन्ड, बाबुराम र वैद्य मिलेर बनेको माओवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी भएपछि… Continue reading
-तेज राई- हुनत, भनिन्छ, ‘सपना नदेख्नु आफुले आफैलाई गरिने ठुलो अपराध हो।’ अमेरिकी लेखक तथा कवि ह्यारी केम्प (1983-960) ले भनेका थिए, ‘त्यो गरीब होइन जोसँग एकै पैसा छैन, तर जोसँग सपना छैन, त्यो महा-गरीब हो।” सपना (Dream) को बारेमा धेरैले थुप्रै लेखेका छन् र बेस्ट सेलर पनि बनाएका छन्। तर आज “युके लाहुरे”को ठुलो… Continue reading